Youtube-ka Oo Arintan Muhiimka ah Soo Kordhiyey | Xaqiiqonews
Youtube-ka Oo Arintan Muhiimka ah Soo Kordhiyey
Shirkadda google ayaa shaaca ka qaaday in ay soo kordhisay badhankan cuusb, kaasi oo yuutuubarada ku saacidi doono in ay si fiican ula falgalaan faalooyin laga dhiibto muuqaaladooda.
Badhan cusub ayaa lagu magacaaba “smart reply”, oo af soomaali ahaan noqonaya “jawaabta caqliga leh”, barnaamijkani ayaa dadka Yuutuubarada ah ka saacidi doonto in ay ka jawaabaan falooyin ay soo qoraan daawadayaasha.
Barnaamijka ayaa siinaya Yuutabarada erayo diyaarsan kuwaasi oo ay u adeegsan karaan in ay ugu jawaab celiyaan faalooyinka aqristayaasha.
Shirkadda google oo barnaamijkani hadal gaaban ka bixisay ayaa tiri “Waan ku faraxsanahay in aan idinla wadaagno badhanka cusub ee Smart reply, kaasi oo loo saameeyey adeegsadayaasha isticmaala Youtube studio”.
Sidoo Kale Aqri..Wajiga Qarsoon ee Youtubleyda..Sirahan Ogow
Badhankan cusub ayaa hadda lagu heli karaa oo kaliya luuqadaha english-ka iyo Isbaanishka, iyagoo sheegay in uu socdo qorsho lagu diyaarinaayo luuqada kale oo badan.
Shirkadda Google ayaa mudooyinkii dambe oo dhan waday qorshooyin badan oo Yuutuubka loogu soo jiidaayo daawadayaal, waxa ay shirkada gacanta kula jirtaa badhan cusub kaasi oo u ogolanaayo Yuutuubarada in ay iska soo duubaan muuqaalo gaaban oo u eg qaabka “tik tok”,.
Sidoo kale shirkadda ayaa diyaarineysay barnaamij kale oo daawdayaasha xasuusinaaya in la gaaray waqtigii hurdada, si looga hortago waqtiga badan ee daawadayaasha ku bixiyaan muuqaalada.